ချီးမွမ်းခြင်းများနဲ့ ကိုးစားလိုက်ပါ | Rev.U Min Lwin
Posted by ဦးမင်းလွင် on 14/09/2013
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	1 Comment
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ကို သူတစ်ပါး ချီးမွမ်းတာကို ခံယူချင်ကြတဲ့ ဆန္ဒတွေ ရှိတတ်ကြ ပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့လုပ် ဆောင်မှု တစ်ခုခုအတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ရဲ့လေးစားရတဲ့သူ၊ ကိုယ့်ရဲ့ခင်မင် ရင်းနှီးရတဲ့သူ၊ ကိုယ့်ရဲ့မိဘများ၊ ညီ အစ်ကို မောင် နှမများ ထံက ချီးမွမ်းစကားကို ရယူချင်တတ်ကြ ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ “အသိအမှတ်ပြု ခံချင်လို့” ပဲဖြစ်တယ် မဟုတ်လား။ ဒီအကြောင်းအ ရာကို သိစေချင်တဲ့ ကျွန်ုပ်ရဲ့ ဆန္ဒအရင်းခံ တစ်ခုကတော့ အထက် က ဖော်ပြ ထားတဲ့ စိတ်နေ သဘောထား ဆန္ဒတွေဟာ လောကမှာ အသက်ရှင်ချိန် လေးအတွက် တခဏလေးပဲ အသိအမှတ်ပြုခြင်း ကိုခံရတာဖြစ် တယ်ဆိုတာကို နားလည်လက်ခံဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ခါတရံ (အမှန်အတိုင်းပြောရ ရင် အချိန်တော်တော်များများမှာ) ဘုရားသခင် ကျွန်တော်တို့ အသက်တာရဲ့ လိုအပ်ချက် များကို ဖြည့်ဆည်း လုပ်ဆောင်ပေး ခဲ့တဲ့ ကောင်းကြီး မင်္ဂလာတွေ ကိုတော့ အကန့်အသတ်မရှိ ခံစားရယူနေပြီး ဘုရားသခင် ကို ကျေးဇူးတင် ချီးမွမ်းတဲ့ စကားလေး တစ်ခွန်းကို ပြောဖို့ မေ့လျော့နေ တတ် ကြပါတယ် …။(ဥပမာ – နေ့စဉ်ရှူရှိုက်ရတဲ့ လေအတွက်)
မိတ်ဆွေအနေနဲ့ ကိုယ့်အပေါ်မှာ ခင်မင် တွယ်တာပြီး ကိုယ့်ကို ချစ်လျက်၊ ဂရုစိုက်တဲ့ လူရဲ့ အကြောင်းဆိုရင် အမြဲဘဲ သတိတရနဲ့ စိတ်ထဲမှာ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ခါတရံ နှုတ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရင်ထဲ ကနေ ဘယ်လောက်တောင် ကျေးဇူး တင်ရှိပါ ကြောင်း၊ အတိုင်းမသိဝမ်းမြောက်ရပါကြောင်းကို မျက်ရည်ထွက် မတတ်ခံစားပြီး ကျေးဇူးတင်တတ် ကြပါတယ်။
ဘုရားသခင် ကျွန်တော်တို့အယောက်စီ တိုင်းအပေါ်မှာ ထားရှိတဲ့ သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်၊ ဂရုဏာတော်၊ သစ္စာတော်၊ ကျေးဇူးတော်အစရှိတဲ့ စိတ်နေသဘောထား ဂုဏ်တော်တွေကို မိတ်ဆွေ အနေနဲ့ လေးလေးနက်နက် ဆင်ခြင်စဉ်းစားစေ ချင်လို့ ဒီဆောင်းပါးကို ကျွန်တော့်အသက်တာမှာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံကနေတဆင့် ဘုရားသခင်အကြောင်းကို ဆင်ခြင်ရင်း ဝေမျှပါတယ်။
ယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအနေနဲ့ ခရစ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင် ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တဲ့ ကယ်တင်ခြင်း ဆိုတဲ့ ကောင်းကြီး မင်္ဂလာကို ခံယူပြီးတဲ့ အချိန်ကစပြီး ခရစ်တော်ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အရှင်သခင်၊ ကျွန်တော်တို့ကို အပြစ် ငရဲကနေပြီး သူ့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ ရွေးနှုတ် ထားပြီးပြီဖြစ်လို့ ခရစ်တော် အရှင်သခင်ရဲ့ အကြောင်း၊ အမိန့်တော် ကိုကျွန်တော်တို့ အမြဲဘဲ ဆင်ခြင် နှလုံးသွင်းပြီး အလိုတော်ကို နာခံ လိုက်လျှောက် ဖို့ရန် မပျက် မကွက် တာဝန်ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို လိုက်လျှောက် ရာမှာလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခွန်အား၊ အစွမ်းအစ တွေကို အမှီပြုလို့ မရတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မှီခို ကိုးစားဖို့ ပေး ထားပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အသက်တာ ကဏ္ဍတိုင်း မှာ ဘုရားသခင် အပေါ် ဘယ်လောက် ယုံကြည် ကိုးစား မှီခိုသလဲ ဆိုတာကို ဘုရားသခင်ဟာ ကျွန်ုပ် တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာ အတွေ့ အကြုံသစ် လေးတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းအသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်ကို ပေးထားခြင်းအားဖြင့် စစ်ဆေးနေတတ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်သူအများစုဟာ လိုချင်တာကိုရော၊ လိုအပ်တာ ကိုရော မရမချင်း ကလေးငယ်တစ်ယောက် ဖခင်ကိုပူစာသလိုမျိုး တောင်းတတ်ကြပါတယ်။ အဖြေချက်ချင်းရရင် တော့ Praise the Lord အဖြေမရရင်တော့ Why? ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့ ဘုရားသခင်ကို တုံ့ပြန်တတ် ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီအတွေ့အကြုံတွေကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကြီးမြတ်တဲ့နာမတော်များကို နှုတ်ကပတ်တော် ထဲက ဖတ်ရှုဆင်ခြင်တဲ့အခါ ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားသခင် အပေါ်ထားရှိတဲ့ အမြင်၊ သဘောထား၊ ခံယူချက်တွေ ပြောင်းလဲ ခဲ့ရပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဘုရားသခင်ရဲ့ နာမတော်တွေဟာ အင်မတန်မှ ကြီးမြတ်တော် မူပါတယ်။ ဘုရား သခင်ဟာ သူ့ရဲ့နာမတော်တွေရှိတဲ့အတိုင်း ကမ္ဘာလောကတစ်ခုလုံး၊ လူ့သမိုင်း ကြောင်းတစ်ခုလုံး၊ လူသားတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အသက်တာ ကို စီမံကွပ်ကဲနေတဲ့ အရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် (၁သက် ၅း၁၈) ”အရာရာ၌ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းကြလော့။ အကြောင်းမူ ကား၊ သင်တို့သည် ထိုသို့ကျင့်စေခြင်းငှါ၊ ယေရှု ခရစ်၌ ဘုရားသခင် အလိုတော် ရှိ၏။”
ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းခြင်းအားဖြင့် ရရှိတဲ့ တိကျမှန်ကန်သော အကျိုးကျေးဇူး(ရလဒ်)ကို ဆင်ခြင်ဖို့ အနည်းငယ်ဝေငှလိုက်ပါတယ်။
ချီးမွမ်းခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကို ကြီးမြတ်စေသည်။
ချီးမွမ်းခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကို ကြီး မြတ်စေသည်။ ချီးမွမ်းခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြဿနာများထက် ဘုရားသခင်အပေါ် မျက် မှောက်ပြုခြင်းကြောင့် ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်၊ ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ အတူရှိခြင်း၊ ဘုရား သခင်၏တတ်စွမ်းနိုင်ခြင်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စဉ်းစားခံယူမှုကို ပြောင်းလဲစေပါသည်။
ချီးမွမ်းခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းကို တည်ဆောက်ပေးသည်။
ဘုရားသခင် ကြီးမြတ်တော်မူခြင်းကို မြင် တွေ့ခံစားရလေလေ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြဿနာများ သည် သေးငယ်သွားလေလေ ဖြစ်သည်။ ချီးမွမ်း ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ ဘုရားသခင် အပေါ် ယုံကြည် ခြင်းအရာကို တည်ဆောက်ပေးသည်။
ချီးမွမ်းခြင်းသည် ခံစားမှုများကို ပျောက်လွင့်စေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ခံစားမှုများ ဖြစ်ကြသော စိုး ရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ သံသယဖြစ်ခြင်းများ သည် ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခြင်းအားဖြင့် ပျောက် လွှင့်သွားစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်ကို ဆုတောင်းပြီးလျှင် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဘုရား သခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏တောင်းလျှောက်မှုကို လုပ် ဆောင်ပေးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည် စိတ်ချခြင်းကို ချီးမွမ်းခြင်း အားဖြင့် သက်သေထူကြပါစို့။
← ဧ၀ံဂေလိဆိုတာ ဘာလဲ။
ဘုရားသခင်နှင့်အတူ လျှောက်လှမ်းသည်ဆိုရာဝယ် . . . →
One comment on “ချီးမွမ်းခြင်းများနဲ့ ကိုးစားလိုက်ပါ”
Ngwayaw Darlagalo on 25/09/2013 at 11:43 AM said:
2013/9/14 Rev.U Min Lwin
> ဦးမင္းလြင္ posted: “လူတိုင္းလူတိုင္းဟာ ကိုယ့္ကို သူတစ္ပါး
> ခီ်းမြမ္းတာကို ခံယူခ်င္ၾကတဲ့ ဆႏၵေတြ ရိွတတ္ၾက ပါတယ္။ ကိုယ္ရဲ႕လုပ္ ေဆာင္မႈ
> တစ္ခုခုအတြက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ့္ရဲ႕ေလးစားရတဲ့သူ၊ ကိုယ့္ရဲ႕ခင္မင္
> ရင္းနီွးရတဲ့သူ၊ ကိုယ့္ရဲ႕မိဘမ်ား၊ ညီ အစ္ကို ေမာင္ နွမမ်ားထံက
> ခီ်းမြမ္းစကားကို ရယ”